”बिहानै लेखेका थिए यस्तो स्ट्याटस”- अल्पआयूमै अस्तायो एउटा ‘चम्किलो तारा’,… – Ap Nepal
October 2, 2021 361
तुलसीपुर । लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तोता तथा सञ्चारकर्मी हेमप्रकाश वलीले नि’धन भएको छ । शुक्रबार दिउँसो उपचारका क्रममा बाँकेको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा वलीको मृ’त्यु भएको पारिवारीक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
Prevभ्रष्टा, चारको अ’भियोग लागेका ट्रा, फिक प्रहरी हाकिमको घरमा सुनको ट्वा, इलेट !
Nextके तपाँईलाई पनि छिन-छिनमा पिसाब लाग्ने समस्या छ ? हुनसक्छ यस्ता घा, तक रोगको संकेत